Ahoana ny fomba hisafidianana ny mpizara mety hiantohana ny fahombiazan'ny tetikasanao | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hisafidianana mpizara mety hanomezana toky ny fahombiazan'ny tetikasanao
La ny areti-mandringana dia nanova ny fomba fanaovan-javatra, manomboka amin'ny fomba fianarana, hatramin'ny fomba fiasa, amin'ny alàlan'ny modely orinasa. Fa kosa, ny areti-mandringana dia nahatonga ny fiovana izay efa tsy azo ihodivirana. Noho izany, na manana orinasa ianao na miasa tena, dia tokony hieritreritra ny hisafidy mpizara tsara hanodinana ny orinasanao.
Raha ny marina, ny ampahany lehibe amin'ny fanampiana eropeana dia natao hanampiana ireo orinasa fanovàna dizitaly. Fomba iray ahafahan'izy ireo mifaninana kokoa ary afaka mihetsika ao anatin'ny tontolon'ny fifaninanana izay ny fampiasana teknolojia vaovao dia mety hidika hoe ny mahasamihafa ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana.
1 Tena mila mpizara ho an'ny tetikasako ve aho?
2 Tombontsoa amin'ny fisafidianana ny mpizara mety
3 Ahoana ny fomba hisafidianana ny serivisy mety
Tena mila mpizara ho an'ny tetikasako ve aho?
Miova izao tontolo izao, ny sehatra lehibe toa an'i Amazon sy ny serivisy an-tserasera hafa dia mandray ny ampahany betsaka amin'ny mpanjifa raha oharina amin'ny serivisy nentim-paharazana. Noho izany dia ilaina ny mampifanaraka ny orinasanao amin'ny fotoana vaovao, toy ny fananganana a tranokala e-commerce amin'ny alàlan'izany hahatratrarana mpanjifa bebe kokoa (tsy ny eo an-toerana ihany).
Mety ho hevitra tsara koa izany digitize ny sasany amin'ireo serivisinao, izay ahafahan'ny mpanjifanao sy ny mpampiasa anao manao asa lavitra na avy aiza na avy aiza, manome fampiononana lehibe kokoa. Na azonao atao ny manome tsotra izao izay ataonao amin'ny alàlan'ny tranokala na bilaogy.
Na izany na tsia, ny mahatsara ny fananana mpizara betsaka ireo:
Tsara kokoa angon-drakitra ho an'ny fanadihadiana miaraka amin'ny Big Data, sns. Fomba iray mialoha ny fanovana ny safidin'ny mpanjifa, ny fanombanana ireo masontsivana amin'ny tena izy, ny fivoarana, ny fampiasana ny paikadim-barotra, sns.
Fahaizana tsara kokoa fanapahan-kevitra misaotra an'ireo fanadihadiana momba ny angona ireo. Raha tsy misy azy ireo dia azonao atao ny mandray lalana tsy mety amin'ny tetik'asa na orinasao.
Midika koa izany fahaiza-manao lehibe kokoa ny fanovana eo amin'ny tsena. Zavatra tena ilaina eo amin'izao tontolo izao mifaninana tokoa ary misy fangatahana be dia be mba hifanaraka haingana sy haingana amin'ny fiovan'ny fironana.
tsotra, manala ny sakana sasany ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifa. Ohatra, amin'ny biraon'ny birao, ny fizotry ny logistika, sns.
Mamporisika ny vokatra mampiasa fitaovana nomerika sy fampiharana. Na dia ekipa lehibe aza izy ireo dia afaka mandrindra tsara kokoa amin'ny fampiasana ireo karazana sehatra fiaraha-miasa ireo.
Se asa itsinjaram-pahefana. Io dia ahafahanao miasa na aiza na aiza tianao, ary amin'ny fitaovana samihafa. Zavatra manakiana ny fanodikodinana ny fameperana ny areti-mifindra.
Mihena ny vidiny amin'ny tranga sasany. Ohatra, raha manondrana ampahany / manontolo ny orinasanao mankany amin'ny rahona ianao fa tsy ara-batana, dia afaka mihary vola ianao toy ny fanofana trano, faktiora ilaina sns.
Tsy vitan'ny hoe mihena ny vidiny, fa azonao atao koa mampitombo tombony. Ary na dia tsy mitranga mivantana aza izany dia azo ahena ny vidiny miaraka amin'ireo sisiny mitovy mba hisarihana mpanjifa bebe kokoa.
Fanitarana orinasa, hahafahana manatratra ny tambajotra nasionaly sy iraisam-pirenena.
Hatsarao ny sarin'ny marika na tetikasanao alohan'ny mpanjifa / mpampiasa. Ho fanampin'izay, miaraka amin'ny fampiononana lehibe kokoa, dia afaka manampy amin'ny fitazonana ny mpanjifa.
Noho izany, tsy tokony halainao ilay fotoana hanavao ny orinasanao na hanomezana fahitana bebe kokoa amin'ny Internet ny tetikasanao.
Tombontsoa amin'ny fisafidianana ny mpizara mety
Safidy tsara ny manomboka mampiasa VPS (Virtual Private Server), na mpizara tsy miankina virtoaly. Karazana masinina virtoaly iray ahafahanao manana ny "plot"-nao ao anaty mpizara ara-batana ary misy tombony mihoatra ny mpizara vy tsy misy vy na natokana. Ohatra:
Barato: Tsy mila mitazona ny mpizara anao manokana ianao, fa mandoa fotsiny ny serivisy ary avelao ny orinasa mpamatsy hitondra ny vidin'ny fanjifana, fikojakojana na fanamboarana.
malefaka: mamela anao handamina mora foana ny mpizara mifanaraka amin'izay ilainao. Ny sasany aza mamela ny fametrahana mandeha ho azy ny sehatra sasany toy ny WordPress, Drupal, Magento, PrestaShop, Shopware, sns, nefa tsy mila manao azy amin'ny tanana ary tsy manana fahalalana teknika. Izany no tranga Mpizara virtoaly azo antoka IONOS.
fisian'ny: ity karazana lozisialy ity dia manana fananana tsara. Amin'izany fomba izany, ny serivisy dia ho mavitrika amin'ny ankamaroan'ny fotoana, tsy misy latsaka matetika izay hahatonga anao ho very vola sy mpanjifa. Ny serivisy sasany dia nampiana fitaovana teknolojia matanjaka indrindra amin'izany, toy ny rafitra fiasa GNU / Linux, rindrambaiko virtualization VMWare ho an'ny HA, Etc.
fiarovana: ny parceling sy ny fepetra fiarovana an'ireo mpizara ireo dia manome anao fahatokisan-tena bebe kokoa.
Tsy Nivadika- Miorina amin'ny kapila miverimberina (RAID) ianao dia hisoroka ny fahaverezan'ny data. Ho eo amin'ny rahona foana izy ireo.
Raha ny amin'ny ny fampiharana amin'ity karazana VPS ity dia azonao atao ny mametraka avy amin'ny pejin-tranonkala tsotra hanomezana fahitana ny orinasa, hampihatra sehatra iray an'ny e-varotra (varotra an-tserasera), bilaogy hividianana vola na hampiasaina ho fisintomana hisarika ny saina, hampiasaina ho tahiry rahona, ary hampiasanao karazana rindrambaiko hafa mihitsy aza ho an'ny filanao ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny serivisy mety
Mazava ho azy fa ny serivera rehetra dia tsy mitovy. Tsy mitovy daholo, ary izany no izy zava-dehibe hisafidianana ny mpizara mety. Miankina amin'izany ny fiarovana, ny fisiana na ny fahombiazana. Antony lehibe raha tsy tianao ho raiki-tahotra ny mpampiasa na ny mety ho mpanjifa satria maty ny tranokala, satria miadana be mandra-pahatongan'ny hatezerany sns.
Raha hisafidy ny mpizara tsara indrindra dia tokony jereo ireo hevi-dehibe ireo:
vCPU- Zava-dehibe ny fanananao cores CPU virtoaly marobe tsara. Ny bebe kokoa, ny tsara kokoa ny fampisehoana, na dia miankina amin'ny zavatra ilainao aza ny zava-drehetra.
ram- Ny fahatsiarovana lehibe indrindra dia zava-dehibe ihany koa mba hitazomana azy hisosa tsara.
fitehirizana: tsy ny fahaiza-manao ihany no zava-dehibe, izay ho singa mametra amin'ny fitehirizana ny rakitrao, ny tahiry, sns., fa zava-dehibe ihany koa fa kapila SSD ireo, izay hanome haingam-pandeha avo kokoa raha ampitahaina amin'ny HDDs.
Fifamoivoizana amin'ny tamba-jotra: Zava-dehibe ny fananana taha ambony indrindra azo atao na tsy voafetra. Izany dia manome antoka fa ireo izay tsy maintsy mifandray amin'ny tranonkalanao na ny tetikasanao dia afaka manao izany tsy misy famerana isam-bolana.
Rafitra fandidiana: Matetika Windows Server na GNU / Linux. Ny distros Ubuntu Server, CentOS, Debian, OpenSuSE, sns dia manome fitoniana, hamafisana ary fiarovana fanampiny, na dia azo atao aza ny misafidy ny Windows amin'ny serivisy sasantsasany (raha mila ny sehatra Microsoft ianao noho ny antony manokana).
fisian'ny: ny serivera dia tokony ho azo antoka sy azo antoka araka izay azo atao. Ny fahafahana dia afaka mandrefy ny fotoana hijananan'ny mpizara. Ny akaiky kokoa ny 100% dia, ny tsara kokoa (ohatra, 99,99% dia taha tsara). Amin'izay dia hahenao ny fotoana "ahena" ny serivisy.
fiarovana: zava-dehibe ny fisafidianana serivisy manome fiarovana firewall, mari-pankasitrahana SSL, IPS / IDS, SIEM, backup (kopia nomaniny), sns.
Serivisy fanampiny:, ohatra, izy ireo dia afaka manana mpanampy hametraka fonosana toa ny WordPress, Drupal, sns., na koa manome anao adiresy adiresy mailaka, fisoratana anarana manokana, sns. Izany rehetra izany dia hanaisotra ny asa ary hanamora ny fanatanterahana ny sehatra irinao.
vidiny: ny tahan'ny dia zava-dehibe ihany koa hahazoana ny serivisy tsara indrindra mifanaraka amin'ny kalitaon'ny / kalitaony.
Serivisy teknika: tsara kokoa raha serivisy 24/7 sy amin'ny Espaniôla. Amin'izay dia azonao atao ny miantehitra amin'ny fanampiana isaky ny mila izany ianao hamahana ireo olana mety hitranga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Ahoana ny fomba hisafidianana mpizara mety hanomezana toky ny fahombiazan'ny tetikasanao
Niala tamin'ny FSF i John Sullivan ary nisy fanovana natao ihany koa tamin'ny FSTR
OnlyOffice Desktop 6.2 efa navotsotra ary izao ny vaovaony